Ihe niile gbasara Amsterdam - Ihe ị ga - ahụ, ihe ị ga - eme na atụmatụ gị kachasị mma | Njem zuru oke
Amsterdam bụ obodo nke Netherlands ma dị na Europe. E hiwere ya n’ebe ahụ na narị afọ nke iri na abụọ dịka ọ bụ obere obodo ịkụ azụ. Ihe ihe karịrị oge ghọrọ otu n'ime ebe kachasị mkpa na mpaghara n'ọtụtụ ọkwa na njem nleta bụ otu n'ime ha.
Otu n’ime ihe ndị kacha adọrọ mmasị ya bụ ọwa mmiri ya ebe ọ bụ na ebe ọ bụla anyị lere anya, ha na-asa ya. Ha karịrị 100 kilomita n'ụdị ọwa mmiri, tinyere akwa ha yana kwa, ụlọ ha na-ese n'elu mmiri na-adọta ọtụtụ elebara anya. N’ikwu okwu banyere ụgbọ mmiri ụlọ, anyị enweghị ike ichefu Ahịa Ahịa Ifuru, nke dịkwa n’elu mmiri wee malite na narị afọ nke XNUMX. N'ime ya, ị nwere ike nweta ọtụtụ bọlbụ tulip dị iche iche.
Nkwụsị ọdịbendị dị na Van Gogh Museum, ebe a na-egosipụta ọtụtụ ọrụ ya. Gbaso njem ahụ, ọ dịghị ihe dị ka ịse foto nke ubi Begijnhof ma rute n'obi obodo ahụ nwere aha Dam Square, mpaghara nwere ọtụtụ ikuku. Mpaghara Red Light bụkwa onye ọzọ ama ama, ebe ị nwere ike ịga na ụka Oude Kerk, yana Jordaan District na n'ezie, Anne Frank House, nke bụkwa ihe nnọchianya nke ebe ahụ. Ikwupu, ọ dịghị ihe dịka Vondelpark iji gwụ na Amsterdam Museum ma ọ bụ Rijksmuseum, nke na-enye gị akụkọ ihe mere eme niile nke ebe ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche banyere ihe ị ga-ahụ na Amsterdam na ụbọchị 3, anyị ga-egosi gị ebe kachasị mma iji ...
Volendam, mme obio emi ẹsimade ndikọ iyak
Taa anyị na-aga Volendam. Ọ bụ obere obodo dị na mgbago mgbago Amsterdam na ...
The Dutch Amsterdam na-aga n'ihu na-hụrụ ka otu n'ime ndị kasị emesapụ aka, akụkọ ihe mere eme na ọchịchọ ịmata ebe na Europe. Obodo ukwu ...
Omenala, ụzọ ndụ na omume na Amsterdam
por Ezigbo Amsterdam eme 5 afọ .
A maara ndị bi na Amsterdam mgbe niile maka ime ihe n'eziokwu na ezi obi. Otu nwoke bara ọgaranya agagh egosi ...
Ebe kachasị mma na agbata obi maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na Amsterdam
Mpaghara gburugburu Zeedijk bụ otu n'ime ebe nkiri kachasị ewu ewu na Amsterdam n'ihi ọtụtụ ụlọ ahịa na ...
Ndụ na Netherlands
Netherlands na-eme nke ọma n'ọtụtụ njiri mara ọdịmma, ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ mba ndị ọzọ…
Ala nke Amsterdam
por Ezigbo Amsterdam eme 6 afọ .
Amsterdam bụ isi obodo Netherlands. Amara maka nnabata ya maka ogwu, nnwere onwe mmadu ...
Ndụ na Amsterdam
Amsterdam bụ obodo na-ewepụta etu esi ama ndị ọbịa niile. Nnukwu ogige a na-akpọ Vondelpark pụtara, ...
He Hua Temple bụ ụlọ nsọ Buddha Buddhist kasị ukwuu na ụdị Chinese. Ọ dị na mpaghara Asia ...